The SEO Iceberg: Nyochaa Ihe Zoro Ezo Na-emetụta Ọchụchọ | Martech Zone
Taa, anyị nwere ọmarịcha oku na ụlọ ọrụ ebe anyị tụlere usoro ọchụchọ maka ihe omimi (ebumnuche). Ọ bụ ezie na ọnụọgụ dị ịrịba ama nke ndị ahịa anyị na ego metụtara ya sitere na ụlọ ọrụ na-achọ nke anyị SEO ọkachamara, Anyị na-eme ihe n'eziokwu mgbe nile septikal nke SEO. Ọ bụghị na anyị anaghị amata ike nke ọchụchọ ọchụchọ - ọ bụ nnukwu atụmatụ nke anyị ịchụpụ ikike na iduga ndị ahịa anyị.
Anyị ahapụla ịnwa ịme egwuregwu algorithms ma tinye backlinks, na-etinye mbọ anyị kama na nyocha miri emi nke ndị na-ege anyị ntị na ọdịnaya dị ịrịba ama nke ga-adọta uche ma mee ka ntụgharị gbanwee. N'aka ozo, anyi adighi ele anya na search engine, anyị na-etinye uche na ndị ọrụ nke search engine. Can nwere ike ịghọ aghụghọ ule ma jikọta ihe nzuzu nke ụlọ ọrụ gị wee kpoo ha niile gaa na peeji nke nsonaazụ ọchụchọ (SERPs)… ma gịnị mezie? Ọ bụrụ na ọdịnaya ahụ abụghị nke, ị gaghị ewere onye ọbịa ahụ si na saịtị gị ịbanye na gị.
Ghara ikwu mgbanwe algọridim na nzụlite teknụzụ. May nwere ike ịme atụmatụ okpu ọcha (atụmatụ ndị na-adịghị emebi usoro ọrụ nke Search Engines), mana ọ bụrụ na injinị na-agbanwe algorithms, ị nwere ike tufuo ego gị niile. Ezi SEO nke ahụ lekwasịrị anya n'omume onye ọrụ na mmepe ọdịnaya; Agbanyeghị, ọgaghị atụfu ego ị tinyere.
Ihe omuma ihe omuma a na-egosi obere okwu. Ọ bụghị naanị ihe niile ị nwere ike ịchọpụta ma rụọ ọrụ ngwa ngwa, ọ na-egosi ọnụọgụ na-eto eto nke ihe na-emetụta azụmaahịa azụmaahịa search engine njikarịcha.
Gbaa mbọ hụ na ọnọdụ dị ike maka saịtị gị site na usoro a maara dị ka njikarịcha Ngini Nchọpụta dị mkpa maka ịga nke ọma na weebụsaịtị. Gịnị bụ uru dị n'ịre nnukwu ngwaahịa na imepụta ọdịnaya ma ọ bụrụ na ọ nweghị onye nwere ike ịchọta ya? Ka ndị ọrụ gbanwere ụzọ ha si eme ọchụchọ na azaghachi ọdịnaya, SEO na-etinye ọtụtụ akụkụ dị mgbagwoju anya nke na-agbanwekwa oge niile, ya mere ọ ga-esiri ụlọ ọrụ ike ijikwa onwe ha. Penny na -ekpo ọkụ
A gosipụtara ihe nnọchianya njikarịcha njin ọchụchọ dị ka ndị a:
Anyanwụ bụ onye nnọchiteanya nke Google ma na-ewepụ ụzarị ọkụ ọchụchọ mmelite ahịa nke na-emetụta odida ala nke iceberg ma ọ bụ, akụkụ nke weebụsaịtị nke na-emetụta ogo nchọta ọchụchọ.
Companies na-anọchi anya ụgbọ mmiri, ga ịnyagharịa aisbeg ma ọ bụ naanị obere akụkụ ya.
N'okpuru elu, e nwere ndị ọzọ ihe iche echiche ma bulite maka nsonaazụ kacha mma.
Ana m ekwu na ị kwesiri gbahapụ SEO? Kpomkwem bụghị, ọ bụ naanị na ị chọrọ itinye gị ego ebe ha ga-kasị enwe mmetụta. Na hoo haa, ọ bụla SEO ọkachamara ndị na-eme ka ha ghọtara algọridim nke Google ma na-ekwe gị nkwa ogo - na-enweghị mgbe ị na-aghọta ndị na-ege gị ntị, mkpali ha, na usoro ọwa niile nke ga-agba ume ntụgharị - abaghị uru iji ya rụọ ọrụ.
Anyị na ndị ahịa na-arụ ọrụ iji kpughee ihe ndị nwere mmetụta dị ukwuu, enwere ihe ndị dị mkpa dị ka ọsọ peeji, usoro nhazi nke saịtị, nyocha isiokwu, na nzaghachi mkpanaka, nke ahụ kwesịrị ịbụ ntọala nke atụmatụ SEO ọ bụla. Agbanyeghị, kama inyocha ọtụtụ puku ihe ndị ọzọ ma mebie ọganihu, anyị na-arụ ọrụ iji mepụta ọdịnaya nke na-adọrọ uche, ikike, ntụkwasị obi, na mgbanwe. Site na ntọala siri ike, usoro ọdịnaya ndị ahụ na-eme ihe ngosi. Ewezuga, nke
Enwere ndị ọzọ. Anyị na ndị nkwusa rụkọrọ ọrụ na-etinye ọtụtụ iri nde na usoro ọchụchọ na ọdịnaya ha iji luso ndị asọmpi ọgụ. N'okwu ndị ahụ, anyị wuru ụlọ nkwakọba ihe data dị mgbagwoju anya nke gafere usoro azụmahịa SEO ọ bụla iji nyochaa ihe ndị dị n'okpuru. Ohere inweta abụghị ụlọ ọrụ gị, n'agbanyeghị!
Nwere ike ịsọ mpi na Google na nnukwu azụmahịa?
Jenụwarị 24, 2017 na 5:25 PM
Edemede mara mma nke nwere nnukwu isi. Ana m adụ ndị mmadụ ọdụ mgbe niile ka ha nwee obi abụọ banyere ndị ndụmọdụ ahụ kwere nkwa na peeji nke 1. O yikarịrị ka ha na-eji usoro aghụghọ spam ma ọ bụ usoro ndị ọzọ eji okpu ojii eme ihe na-enyeghị ezigbo uru iji njedebe, aka ndị ahịa.